KUTENGA KUDENGA KUNYANYA
Inventory manejimendi ndeimwe yezvinonyanya kunetsa zvebhizinesi rega rega riri kuita zvebhizimusi mashandiro, kunyanya kutengwa kwezvinhu. Nekudaro, sezvo e-commerce indasitiri yakura, kunetsekana kwekuverenga kwakaparara, nekuda kwenzira nyowani yekupa cheni nzira iri kuwedzera kuve yakajairika.
Kudonhedza Kunonoka KUSVIRA KUTENGA KUNYANYA
Kubuda kwekudonhedza kutumira senge yekutengesa nzira yekuparadzira kwakonzera kuti kambani isatenge uye kuisa zvinhu zvainotengesa. Anodonhedza mutengesi anotengesa chigadzirwa uye anogona kuzvitenga kubva kune wechitatu bato (mugadziri, mutengesi, kana mumwe mutengesi) kana neimwe nzira anoita masevhisi evanodonhedza mamiririri ekugadzirisa ese ari maviri kutenga kutenga uye kutumira.
Nekuda kweizvozvo, kudonhedza kunoshandura iro bhizinesi kuita musika uko vatengi vanogona kupinda nekuisa maodha. Mushure mekunge mutengi aisa odha, iwe unobhadharira mutengi, uye anodonhedza mumiririri anokubhadhara iwe. Iwe haufanire kumbonetseka nezvekutsvaga kwakanakisa vatengesi vezvigadzirwa zvako nemitengo yakanaka. Iwe haufanire kunetseka nezve chigadzirwa chekuchengetedza kana kugovera.
NEI USARUDZA FULFILLPANDA?
KuFulfillPanda, tinobata kambani yako sekunge ndeyedu.
Iwe haufanire kufunga nezvekutsvaga kwakanakisa vatengesi vezvigadzirwa zvako nemitengo yakanakisa! Zadzisa Panda inoda kutora huremu kubva pamafudzi ako.
Tichishandisa edu akazara ekutengeserana, tinogamuchira mitengo yemitengo kubva kune vanogadzira, vatengesi, uye vatengesi uye tinotaurirana mitengo yakanakisa yezvigadzirwa zvako.
BEST PRICE YEMAHARA BASA
FulfillPanda rekutenga timu inoziva panotangira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinoenderana neyekufungidzira specs, isu tinogara tichiwana chiyero pakati pehunhu nemutengo.
Kutenda kune yedu yezuva nezuva yekubata vhoriyamu, isu tinokwanisa kuwana yakanakira dhizaina neyedu yekutenga vhoriyamu inozodzikisa mutengo wako kune hukuru hukuru.
Isu tinogara tichitarisa nemutengesi nezvinochinja zvigadzirwa nekudaro iwe uchazoziviswa kana tangove nevanokunda uye sezvo isu tavaka hukama hwakasimba nemutengesi, vanogara vachitipa mutengo wakanakisa sezvavanogona.
Uyezve, haufanire kunetseka nezve kupererwa nesitoko.
Isu tichava avo vanochengeta ziso pane yako stock, kuigadzirisazve, uye kuitisa pano paFulfillPanda.